Fampidirana: Giant tanteraka feno ho an'ny olona manokana, mpianatra ary mpampianatra, ny famandrihana isan-taona fanao amin'ny fanovana, sary mihetsika sy fitaovana VFX | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Home » Vaovao » Fampidirana: Giant tanteraka noho ny olon-tsotra, mpianatra sy mpampianatra, ny famandrihana isan-taona fanao amin'ny fanovana, ny sary mihetsika sy fitaovana VFX.
Fampidirana: Giant tanteraka noho ny olon-tsotra, mpianatra sy mpampianatra, ny famandrihana isan-taona fanao amin'ny fanovana, ny sary mihetsika sy fitaovana VFX.
Portland, OR - Novambra 25, 2019 - Red Giant dia nanambara androany ny fahafahana Mena lehibe ho an'ny tsirairay, mpianatra ary mpampianatra. Fanitarana ny fahazoan-dàlana momba ny rindrambaiko, Red Giant Complete dia serivisy famandrihana izay manome mpanonta, mpamolavola hetsika ary mpanakanto VFX daholo ny fitaovana Red Giant amin'ny vidiny iray mora - Trapcode Suite, Magic Bullet Suite, Universe, VFX Suite ary Shooter Suite. Miaraka amin'ny Red Giant Complete, ny mpandray anjara isan-taona dia hanana ny havaozina farany indrindra amin'ny fitaovana rehetra, manavotra dolara an'arivony noho ny fahazoan-dàlana maharitra maharitra.
Watch izao: Mena lehibe
“Red Giant Complete dia efa azon'ny mpanjifanay volavola an-taonany maro, miaraka amina alalana an'arivony ampiasaina amin'ny tambajotram-pifandraisana, studio sy sarimihetsika ary oniversite. Ary ankehitriny, noho ny fangatahan'ny besinimaro, tena faly izahay manolotra fahazoan-dàlana amin'ny famandrihana ho an'ny mpanjifanay rehetra, "hoy i Chad Bechert, CEO an'ny Red Giant. “Mandritra izany fotoana izany dia tsy nisy niova. Na dia mieritreritra aza izahay fa fifanarahana tsy mampino ny Red Giant Complete, dia fantatray fa ny mpanjifa sasany dia mahazo aina kokoa mividy rindrambaiko amin'ny fomba nentim-paharazana. Tianay antoka fa manana izay ilainy ny vondron'ireo mpanakanto manan-talenta, noho izany dia manohy manome lisansa maharitra amin'ny vidiny mahazatra izahay. ”
Red Giant Complete dia $ 599 $ iray isan-taona ho an'ny olona na $ 299 ho an'ny mpianatra sy mpampianatra. Zahao hoe ny bilaogy Red Giant hianatra bebe kokoa momba ny fomba hivadihana amin'ny Red Giant Complete ary maninona no izao no fotoana tsara indrindra hanaovana ny fihodinana, miaraka amin'ny tolotra fampidirina manokana sy fotoana voafetra ho an'ny mpanjifa Suite efa miorina (jereo ny antsipiriany misimisy kokoa eto ambany).
Ny tombony azo amin'ny mena goavambe mena
All Access - Red Giant Complete dia manome mpanakanto ny fidirana amina andiany feno ao amin'ny Red Giant fitaovana - ao anatin'izany ny suite efatra sy ny Universe rehetra.
Manaraka toetr'andro - Red Giant Complete dia misy fanavaozana maimaimpoana, ka ny mpampiasa dia hanana hatrany ny fanovana farany, sary mihetsika sy fitaovana VFX, amin'ny fotoana hanavaozana azy ireo.
Famonjena lehibe - Miaraka amin'ny Red Giant Complete, dia hisy vola an'arivony dolara ny tsirairay, ny mpianatra ary ny mpampianatra. Ny fividianana fitaovana Red Giant rehetra dia mety ho lafo $ 3,495. Miaraka amin'ny vidin'ny famandrihana dia mila mandritra ny taona maro ny 5 handoa vola mitovy amin'izany ho an'ny fahazoan-dàlana maharitra mandrakizay - ary tsy hampiditra ny vidin'ny fanavaozana izany.
Red Giant Complete dia ahitana:
Trapcode Suite (reg. $ 999): Fitaovana tena ilaina amin'ny indostrian'ny famoronana sary sy hetsika ara-pahitana 3D ao amin'ny Adobe® After Effects®, ankehitriny miaraka amin'ny motera fizika Dynamic Fluids ™.
Magic Bullet Suite .
Izao Rehetra Izao (reg. $ 199 / taona): Ny fanangonam-bokatra Red Giant ny plugins mihoatra ny 80 GPU-hanafainganana ho an'ny mpanonta ary mpanakanto sary mihetsika.
VFX Suite (reg. $ 999): Ny suite vaovao rehetra momba ny fanakorontanana, ny fanaraha-maso, ny fanadiovana ary ny fijerena fiantraikany ara-maso, ao anaty Adobe After Effects.
Shooter Suite .
Isan'ny raha novidiana misaraka: $ 3,495
Lehibe Giant tanteraka: $ 599 / TAONA
Manavao izao ho an'ny 50% Off Red Giant Complete
Ho an'ireo manana fahazoan-dàlana Red Giant amin'izao fotoana izao ho an'ny suite vokatra rehetra, na fisoratana anarana mavitrika ho an'ny Universe, Red Giant dia manolotra fanavaozana manokana ny Red Giant Complete amin'ny $ 299 fotsiny - izany dia 50% amin'ny taona voalohany an'ny Red Giant Complete *.
Ampiasao ny kaody coupon: RGC50
Famaranana ny tolotra omena: 2 / 25 / 20
Mpianatra sy mpampianatra izay manana Red Giant Suite na manana famandrihana mavitrika ao amin'ny Universe, Red Giant dia manolotra fampivoarana manokana ho an'ny Red Giant Complete amin'ny $ 149 fotsiny.
Ampiasao ny kaody coupon: RGC50A
* Ny tolotra 50% amin'ny Red Giant Complete ho an'ny olona tsirairay, ny mpianatra ary ny mpampianatra dia manan-kery afa-tsy amin'ny herintaona voalohany amin'ny famandrihana isan-taona.
Mena goavambe mena ho an'ny mpanjifan'ny volume
Raha orinasa iray mividy fahazoan-dàlana dimy na mihoatra ianao, dia jereo ny Programme Giantant's volume (www.redgiant.com/volume/), izay ahitana endri-javatra fanampiny mifantoka amin'ny fandraharahana toy ny fahazoan-dàlana mitsingevana, fametrahana lavitra, fanohanana mandroso, fanofanana ary maro hafa.
Red Giant Complete dia amina suite maromaro samihafa, samy manana ny fitaovana amina fitaovana ary fampahalalana mifanentana momba azy. Ny fitaovana tsirairay dia mihazakazaka amin'ny Mac sy Windows ary mifanentana amin'ny Adobe After Effects, raha toa kosa ny fitaovana sasany dia miasa ihany koa amin'ny fampiharana host-application fanampiny. Tsidiho ny Giant Mena pejy fanamafisana hianatra bebe kokoa momba ny vokatra tsirairay.
The Red mianiana tsy
Red mianiana tsy dia Red Giant mpanjifa ny fanoloran-tena fahasambarana, tsy misy fividianana hassles. Fantaro ny momba ny Red mianiana tsy antoka amin'ny www.redgiant.com/company/red-pledge/.
Mangataka kitapo famerenam-baovao feno goavambe
Ireo mpikambana ao amin'ny haino aman-jery dia asaina hijery ny Red Giant Complete ary koa ireo fitaovana manokana na suite manokana avy amin'ny Red Giant. Raha mila fanazavana fanampiny na hangataka kitapo famerenam-bokatra, azafady mifandraisa amin'i Megan Linebarger amin'ny [email voaaro].
Red Giant dia rindrambaiko natao ho orinasa ny mpanakanto manan-talenta sy ny teknolojia, izay miara-miasa mba hamorona fitaovana tsy manam-paharoa ho an'ny mpamokatra sarimihetsika, tonian-dahatsoratra, VFX mpanakanto, mpamorona sy ny sarimihetsika. Ny kolontsaina orinasa dia mifantoka amin'ny fitadiavana mahay mandanjalanja eo amin'ny asa sy ny fiainana - dia miantso azy io hoe "ny roa Fehiny" - filozofia io dia manampy antsika tsy miraharaha pitsiny izay manohana ny fananganana tsotra fitaovana hamoa vokatra goavana. Nandritra ny folo taona farany, ny vokatra (toy ny Magic Bullet, Trapcode, Izao Rehetra Izao sy ny PluralEyes) dia lasa ny fitsipika ao amin'ny horonan-tsary sy handefa lahatsoratra-famokarana. Maherin'ny 250,000 mpampiasa, dia saika tsy ho vita ny hijery 20 minitra ny TV tsy nahita ny rindrambaiko nampiasaina. Avy amin'ny zavatra niainany araka ny mpanakanto sy mpamokatra sarimihetsika, isika hiandrandra ny tsy manome fitaovana ho an'ny mpanakanto, fa ny fitaomam-panahy ihany koa. Jereo ny horonan-tsary, mianatra avy teo ambonin'ny Tutorials 200 maimaim-poana, na hamantatra ny rindrambaiko amin'ny www.redgiant.com.
(E) [email voaaro]
Teaser "Assassin's Creed Valhalla" Teaser dia miankina amin'ny Blackmagic RAW Workflow - Novambra 19, 2020
Advocate Aurora Health Campaign / Ny Colonie fampitana injeniera fampitana Engineering Fampahalalam-baovao mivantana-sosialy Fampitana-SocialMedia Fampitana-SocialMeida fanovana Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor SJGolden - Telo sy zana-tsipìka The Colonie Ny Colonie - News THE COLONIE / Chicago Ultra HD Forum Video injeniera 2019-11-25
Previous: Sound Lounge no manolotra Serivisy Podcast
Next: CRM Studios dia mbola mandroso matanjaka miaraka amin'ny Facilis